सुदूरप्रदेशमा संक्रमित बढेकाले लकडाउन थप सशक्त हुनेछ – मुख्यमन्त्री भट्ट – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७६ चैत २४ गते १४:३१
काठमाडौ- नेपालमा पुष्टि भएका कोभिड–१९ का नौ संक्रमितमध्ये चार सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् । शनिवबार एकसाथ सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका दुई पुरुष र एक महिलामा कोरोना भएको पुष्टि भएपछि रोगको रोकथाम र निगरानीमा चुनौती थपिएको छ ।
अहिलेसम्म विदेशवाट स्वदेश फर्किएकामा यो रोगको संक्रमण भएको देखिएकामा फर्किएका संक्रमित व्यक्तिमार्फत धनगढीका ३४वर्षीया एक महिलामा यो रोग सरेको देखिएको छ । संक्रमित व्यक्तिमार्फत स्थानीयवासीमा कोरोना सरेको घटना यो नेपालमा पहिलो भएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकार केकस्तो रणनीति अपनाएर अघि बढिरहेको छ र ?
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसारको तयारी गरिरहेको छ । यो भनेको क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यहाँ मानिसलाई राख्ने, जाँच गर्ने कुरा हुन् । संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने कुरामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । त्यसका साथै हामीले प्रदेशमा उपलब्ध नौ वटै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेका छौंँ । हामीले अब थप पन्ध्र वटा भेन्टिलेटर स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेका छौंँ । जनतामा विश्वास कायम रहिरहने गरी हामी काम गरिरहेका छौ।
कोरोनाको रोकथाम र निगरानीका लागि प्रदेशमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था के छ ? निजी मेडिकलहरुसंँग समन्वय कत्तिको गर्नुभएको छ रु सामान्य बिरामी भएको व्यक्तिले पनि यति बेला सहज रुपमा उपचार नपाएको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ नि ?
प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री केही दिनका लागि पुग्ने भए पनि लामो समयका लागि पर्याप्त नभएको अवस्था त हो तर आत्तिहाल्नुपर्दैन किनभने केन्द्र सरकारले पनि थप केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याइरहेको र प्रदेश सरकार आफँैले पनि तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।
हामीले केन्द्र सरकारलाई सुदूरपश्चिममा चार जना संक्रमित देखिसकेको हुनाले यस प्रदेशलाई केन्द्र बनाएर आवश्यक सामग्री र चिकित्सकको टोली पठाउनुपर्ने कुरा भनिसकेका छौंँ ।
हामीले निजी मेडिकलहरुलाई भनिसकेका छाँंै, कुनै पनि जनताले औषधि उपचार पाएनांैँ भनेर आउने स्थिति नदेखियोस् । यदि त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने हामी कडा कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौंँ । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले पनि यस संकटको बेला स्वास्थ्य सेवा दिने काममा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
यदि कसैले महामारीको बेला कालोबजारी गरेको पाइए प्रचलित कानूनअनुसार हदैसम्मको कारवाही हामी गर्नेछौंँ । यसका लागि हामीले अनुगमन टिम पनि बनाएका छांै । अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गरेको पाइएमा वा उपभोक्ताको गुनासो आए हामी सम्बन्धितलाई कारवाही गर्नेछौ ।
हेर्नुस्, मानिसहरु सामान्य समय जस्तै जसरी राहत वितरण गर्ने तस्वीर लिने अनि प्रचार गर्ने काममा लागेका छन् । यसो गर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले आइतबारदेखि अव्यवस्थित रुपमा विभिन्न नाममा वितरण गरिँदै आएका राहत वितरणमा रोक लगाएका छौ । मानिसहरुले संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुप¥यो । यदि कसैलाई सहयोग गर्ने इच्छा चाहना भए देशमा तीन तहका सरकार छन् । कुनै पनि सरकारसँंग समन्वय गरेर वितरण गर्न सकिने छ । हैन भने कुनै सामाजिक दूरी कायम नगरी भीडभाड गरेर राहत वितरण गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तो हैन । हामीले धनगढीमा खासगरी दुवईबाट आएका व्यक्तिलाई संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाइ ट्रयाकिङ गरेका छौँ । हामी यस विषयमा गम्भीर नै छांैँ । हामीले तेस्रो मुलुक मात्र हैन भारतबाट आएकालाई समेत ट्रयाकिङ गरेका छौँ । सरकारले केही गरेन, सरकार हरायो भन्नु भनेको विरोधका लागि विरोध मात्र हो । विरोध गर्नेहरु गरिहन्छन्, हामी आफ्नो काममा लागिरहन्छौ ।
सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ त्यसलाई सफल बनाउन म पहिले सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो कसैले निम्ताइदिएको समस्या होइन र सामान्य अवस्था पनि होइन । त्यसैले गभ्भीरताका साथ लिइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, सुदूरपश्चिममा चार जना संक्रमित देखिइसकेपछि सबैले अझ बढी सतर्क रहन जरुरी छ । यदि परिवारका कोही सदस्य बाहिरबाट आएका छन् भने केही दिन टाढा नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ । म सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी जनतालाई सुरक्षित भई होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।रासस)
औँठी लगाउने र आइफोन बोक्नेहरु राहतको लाइनमा